Ijaarsa buufata elektirikii Gannaalee Dawaa
Waldaan kennitoota murtee kubbaa miilaa ibsa baase - Friday, 04 May 2018 22:19
Shaapiyoonaan liigii piriimeerii addaan cite - Friday, 04 May 2018 22:12
Dorgommiin liigii daayimandii - Friday, 04 May 2018 22:04
Oromiyaan burqaa atileetotaa taatee akka ittifuftuuf xiiqiidhaan hojjetamuu qaba - Friday, 04 May 2018 16:48
Tapha guutuu Oromiyaa, dirree jaalalaa dargaggootaa - Friday, 04 May 2018 16:46
Ijaarsa buufata elektirikii Gannaalee Dawaa Featured
Wiirtuu ijaarsa tajaajila elektirikii Gannaalee Dawaa lakkoofsa sadii
Misoomni biyyattii ittifufiinsa akka qabaatu gochuuf dhiyeessa humna elektirikii fooyyessuun dhimma murteessaa ta'uun kan mormisiisu miti. Sababiinsaas humni elektirikii haalaan diriire sirna dinagdee qonnaan durfamaa gara indastiriitti ce'u akka cimuuf gahee olaanaa qaba waan ta'eef.
Kanumarraa ka'uun mootummaan KGT 2fa keessatti dhiyeessa tajaajila humna elektirikii guddisuuf pirojektota addaddaa bocee hojjechaa kan jiru yoo ta'u, ijaarsi buufata tajaajila elektirikii Gannaalee Dawaa lakkoofsa III hojjetamaa jirus asuma keessatti kan eeramuudha.
Ijaarsi buufatichaa maallaqa liqiidhaan baankii Chaayinaa, 'Impoorti Ekispoorti' jedhamurraa argameen adeemsifamaa kan jiru yoo ta'u, bara dhufu raawwatama jedhamee eegama. Maallaqni liqiidhaan argame kun labsii 2000/2009 ta'ee Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatiin raggaasifameera.
Buufatichi humna elektirikii meegaa waatii 275 kan maddisiisu waan ta'eef fedhii humna elektirikii biyyattii guutuurra darbee tajaajila humna ibsaa gara biyyoota ollaatti gurguruuf karoorfame kan tumsu ta'uu sanadoonni adda addaa ni ibsu.
Humna elektirikii buufatichi maddisiisurraa wiirtuu Yirgaalamii hanga Walaayittaa Sooddootti jiruuf kiiloo vooltii 400 akkasumas indastirii paarkii Hawaasaatiif kan dhiyaatu ta'uunis ibsameera. Pirojekticha raawwachiisuuf doolaarri miliyoona 249, kuma 323fi 75 kan ramadameera.
Gama biraatiin maallaqni liqiidhaan argame kun dhallisaa baay'ee xiqqoo ta'uurra darbee waggoota 20 keessatti kan deebi'u waan ta'eef dinagdeerratti dhiibbaa kan hinuumneefi tooftaa liqii biyyattiin hordoftu waliin kan walsimatu ta'uu sanadoonni labsii liqichaa wajjin dhiyaatan ni eeru.
Maallaqni liqiidhaan argame kun sirnaan pirojekticha qofaaf ooluusaa Ministeerri Walta'iinsa Dinagdee akka to'atu Manni Marii Bakka Bu'oota Ummataa hubachiiseera.
Torban kana/This_Week 28775
Guyyaa mara/All_Days 1313286